Wp/blk/လာအိုခမ်းထီ - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | blkWp > blk > လာအိုခမ်းထီ
လာအိုခမ်းထီ မွေးတဝ်းလဲ့ "လဝ်" ခမ်းထီ (လာအို: ລາວ, Lāo) (အဲင်းကလေတ်: Laos) နဝ်ꩻ တရာꩻဝင်ႏအမိဉ်ꩻအနေႏ အဝ်ႏဟဲ့ꩻဖန်ခါꩻဒါႏ လာအို(လဝ်) ခမ်းသားဒီမိုကရဲစ်တစ် ခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီ နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ သိုသယ်လစ်ခမ်းထီတဖြုံႏတဲင် အာသျ အခဝ်ကွဉ်ႏနဝ်ကို ထွာဒျာႏ ပင်ႏလယ်ႏထီတဖူꩻတအဝ်ႏတဝ်းဒါႏ ဟံႏကောင်ခမ်းတခမ်းဒျာႏသွူ။ အဉ်ဒိုခယ်ႏကြွန်ရွေꩻ အခဝ်ထာႏဝ်ကို ကအဝ်ႏဒင်ႏဒါႏ လာအိုခမ်းထီယို ဖဲ့ꩻတွို့ꩻထင်ꩻနဝ်ꩻ မျန်မာ၊ ခယ်ႏ၊ ဖဲ့ꩻတွို့ꩻတောမ်ႏဖဲ့ꩻတွို့ꩻနဝ်နဝ်ꩻ ထုဲင်ꩻ၊ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ဗီယက်နမ်၊ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏနဝ်ဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ ကမ်ဗောဒီးယား ခမ်းထီဖုံႏ အဝ်ႏခူရောင်ꩻခါꩻနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းထီဝေင်ꩻတန်တောမ်ႏ အတန်သွတ်ꩻဝေင်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝေင်ꩻဗီယန်ထျန်း နဝ်ꩻသွူ။ ဟံႏနယ်ႏဧရိယာႏ အအဲဉ်ႏအလုဲင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏစတုရန်းမဲင်ႏ ၉၁,၄၂၉ မဲင်ႏ၊ ၂၀၁၉ ဗာႏ စာႏရင်ꩻအရမ်ꩻအလꩻ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းအဝ်ႏ ၇,၁၂၃,၂၀၅ (၇ သန်း) ဖြာꩻတဲင် ခမ်းကိုလိုꩻဖြာꩻ (၉၀%)နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လောလာအိုခွိုꩻ လိုꩻမျိုꩻဖုံႏဒျာႏသွူ။ လာအိုခမ်းထီကို ကိုꩻကွဲႏဘာႏသာႏအနေႏ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၉၈ %)၊ ခရိယာန်ႏဘာႏသာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၁.၅ %)နဝ်ꩻသွူ။
လာအိုခမ်းသား ဒီမိုကရဲက်တစ် ခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວSathalanalat Paxathipatai Paxaxôn Lao
ဆောင်ႏအွံ: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Wp/blk/Exponential search' not found.
Santiphap Ekalat Paxathipatai Ekaphap Vatthanathavon
ခမ်းထီငဝ်းသꩻချင်ꩻ: Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Wp/blk/Exponential search' not found.
အာသီယံ အကို (dark grey) – [Legend]
3.4% ဖူ ထုဲင်ꩻ
11.6% အလင်[မတ်ရောမ် 1]
66.0% ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ[မတ်ရောမ် 2]
1.8% အလင် / ဘာႏသာႏအဝ်ႏတဝ်း
တပါတီစနစ် မဲက်ထရစ်–လီနဉ်ဝါဒ ပါတီတဗာႏ သိုသယ်လစ် ခမ်းနမ်းဗွေႏခမ်းထီ
• Lan Xang ခွန်ဟော်ခမ်ꩻစိုး
• Luang Prabang ခွန်ဟော်ခမ်ꩻခမ်း, Vientiane ခမ်း & Champasak ခွန်ခမ်း
၁၉၄၇ ဗာႏ မေ ၁၁
၁၉၅၃ ဗာႏ အောက်တိုဗာ ၂၂
• ယားကုဲင် ခွန်ဟော်ခမ်ꩻစနိစ်
၁၉၇၅ ဗာႏ ဒီသဉ်ဗာ ၂ နီꩻ
၁၉၉၁ ဗာႏ ဩဂဲစ် ၁၄
၂၃၇,၉၅၅ km2 (၉၁,၈၇၅ sq mi) (အရန်း: အရန်း ၈၂)
• 2020 အရမ်ꩻ
7,275,556 (အရန်း - အရန်း ၁၀၅)
• 2015 သန်ခေါင်စာႏရင်ꩻ
၂၆.၇/km2 (၆၉.၂/sq mi) (အရန်း - 191st)
US$2,670 (အရန်း - 131st)
ထာႏဝ · အရန်း ၁၃၇
ကစ် (₭) (LAK)
လာအိုအခိန်ႏအွိုင်ꩻ ICT (UTC+7)
ခေတ်ဟန်ႏသနီꩻ လာအိုခမ်းထီ သမဲင်ꩻခြောင်ꩻတောမ်ႏ ယေန်ႏငဲးရေꩻဆဲင်ႏရာꩻ ဝိသေသဖုံႏနဝ်ꩻ ယီးထွေထောင်နွောင်ꩻဒျာႏ တယ်ႏ ၁၄ ရျာꩻဗူႏ ဗꩻတွိုႏ ၁၈ ရျာꩻဗူႏ အာသျခဝ်ကွဉ်ႏနဝ်ကို အတန်သွတ်ꩻကထွာဒါႏ လဉ်းသဉ်းခမ်း နဝ်ꩻသွူ။ အာသျခဝ်ကွဉ်ႏနဝ်ကို ဟံႏပထဝီႏအလꩻ အဝ်ႏထိုꩻ အထာႏဝဗဟိုႏကိုတဲင် ထွာအီဒျာႏ ဟံႏကောင်ကွန်ႏသယ်ႏ ဖြေꩻစာကူꩻကားရေꩻ ဗဟိုႏဌာႏန ခမ်းတခမ်းတဲင် စီꩻပွာꩻရေꩻအလꩻ တကာႏတဝ်း ယေန်ႏငဲးရေꩻအလꩻလဲ့ လွိုင်ႏကွုန်ꩻပါနဝ်ꩻသွူ။ လာအိုခမ်းထီနဝ်ꩻ အဝ်ႏနွို့ပါခါꩻ အာသျပစိဖိတ် ကွန်ႏသယ်ႏသဖော်ꩻဗိုန်ချက်အစွိုꩻ၊ အာသီယံ၊ အာသျခဝ်ကွဉ်ႏအစွိုꩻ၊ လာဖရန်ကိုဖန်းနီအစွိုꩻဖုံႏကို အစွိုꩻနွို့ခမ်းတခမ်းဒျာႏသွူ။ လာအိုခမ်းထီနဝ်ꩻ ဒင်ႏလဝ်လွေꩻခန်း ကမ္ဘာႏကွန်ႏသယ်ႏအစွိုꩻ အစွိုꩻနွို့ခမ်းထီအနေႏ ၁၉၉၇ ဗာႏကိုတဲင် တွိုႏ ၂၀၁၃ ဗာႏ လာဖေဖော်ဝါရီ ၂ နီꩻနဝ်ꩻ ထွာလွေꩻခန်း အစွိုꩻနွို့ခမ်းထီ အဗွေတဗာႏနဝ်ꩻသွူ။
လာအိုခမ်းထီနဝ်ꩻ အဝ်ႏထူႏသုင်ꩻဒါႏ "ပါတီတဗာႏ သိုသယ်လစ် ခမ်းနမ်းဗွေႏခမါးထီ" ဒျာႏတဲင် အဝ်ႏကျင်ꩻသုင်ꩻလွေꩻ မာတ်ဝါဒ တောမ်ႏ လီနဉ်ဝါဒသွူ။ အိုပ်ချုတ်ရေꩻနဝ်ꩻ လာအိုခမ်းသားတောႏလန်ႏရေꩻပါတီ အဝ်ႏအိုပ်ချုတ်ဒျာႏတဲင် ဝွေꩻသီးအိုပ်ချုတ်ရေꩻဆꩻလ့ကို အစိုႏရအစွိုꩻတမွေးတဝ်းဒါႏ အစွိုꩻအဗူႏ လဝ်းနယ်ချက်အလꩻ ကဲဉ်းအာ အဝ်ႏခံႏဗာႏ ဝင်ꩻပေ့ꩻရဲး လိုꩻအခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏ၊ ခံႏဗာႏတေက်ꩻနျꩻအံႏနွောင်ꩻနွိုင်ႏဖုံႏ၊ ရဲးထွော့ခါꩻ ခမ်းသားလွစ်တခြင်ခွင်ꩻဖုံႏ တောမ်ႏ တေက်ꩻနျꩻအိုပ်ချုပ်လွေꩻ လိုꩻမျိုꩻပေႏဖုံႏအကျောင်ꩻ အဝ်ႏဒင်ႏနယ်သေႏသေႏနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းထီရေꩻအလꩻတောမ်ႏ ယေန်ႏငဲးရေꩻအလꩻ ကတန်ထိုဒါႏ လာအိုလိုႏမျိုꩻနဝ်ꩻ လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်းအဝ်ႏ (၅၃.၂ %)တဲင် ကဲဉ်အားနဝ်ꩻ အဝ်ႏအုံလွေꩻဒျာႏ ဟံႏဖွိုႏရပ်ခင်ႏလမ်းကိုနဝ်ꩻသွူ။ မဲင်ꩻ-ခမာ လိုꩻမျိုꩻဖုံႏ၊ မုန်းလိုꩻမျိုꩻဖုံႏ တောမ်ႏ ဒေႏသခံႏခမ်းကောင်ခမ်းရင်ꩻသား အလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏအုံအာဒျာႏ ကောင်ထျꩻတောမ်ႏ ကောင်ရွေꩻလောင်း ခမ်းကောင်ရပ်ခင်ႏလမ်းကိုသွူ။
လာအိုခမ်းထီ လွိုင်ႏကွုန်ꩻထင်ႏထိုတာႏ မဟာဗျူဟာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အဝ်ႏထီခြောင်တန်ကို ထေထန်ႏလွေꩻ တျာႏမေႏတဲင် စာႏအံႏလွေꩻဖေႏယင်း ဗော့ꩻရာꩻခမ်းထီဖုံႏ ကထွာဒါႏ ထုဲင်ꩻ၊ ခယ်ႏ၊ ဗီယက်နမ်ခမ်းထီဖုံႏတဲင် အခေႏခံႏလွေꩻ ကလꩻလွဉ်ဒါႏ ရွဉ်စာတျာႏမေႏအလောင်းတွော့ꩻ ဖေႏကထွာ ကောင်လောင်းကွန်ႏသယ်ႏ သွုပ်ဆွိုက်ရေꩻခမ်းထီလဲ့ အဝ်ႏခွုမ်မာꩻတယ်ႏဆို့ꩻလွေꩻစလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ။ တယ်ႏဆို့ꩻသွုပ်ဆွိုက်ခါꩻလဲဉ်း မေႏရထာꩻတဖူꩻရဲဉ်ႏ ၄ လီး တောမ်ႏဗော့ꩻရာꩻခမ်းထီဖုံႏတဲင် ထွာအီသက်သေႏနေနေသွူ။ လာအိုခမ်းထီနဝ်ꩻ အာသျခမ်းကွဉ်ႏနဝ်တောမ်ႏ ပစိဖိတ်ဒေႏသကို စီꩻပွာꩻရေꩻအလꩻ ထွာဒျာႏ လွိုင်ႏကွုန်ꩻထင်ႏထိုလွဉ်အာႏ အမွိုင်ꩻသွတ်ꩻခမ်းတခမ်းဒျာႏအနေႏ ကမ္ဘာႏဘဏ် အဝ်ႏယီးနယ်လွေꩻတဲင် တယ်ႏ ၂၀၀၉ ဗာႏစာႏရင်ꩻအလꩻ စွုမ်ႏနေင်ႏ ခမ်းကိုထေထန်ႏနွောင်ꩻကွန်ႏ GDPထင်ႏထိုအာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏတိုꩻလွဉ် ပုင်ႏမဲဉ်ႏ ၇.၄ % ရပ်နဝ်ꩻသွူ။
အွောန်ႏနယ် လာအိုခမ်း ကော့ခ်ပန် ရာႏသီႏဥတု အစွိုးအမျိုꩻဟံႏပုင်ႏ
လာအိုခမ်းထီ ရာႏသီႏဥတု ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ အလျားဖဲ့ꩻ သာဗားနား ရာႏသီႏဥတုတဲင် ခမ်းမုတ်သုံပုင်ႏစံႏ ဒို့ꩻတခြို့မုꩻလဲ့ အဝ်ႏနေနေသွူ။ တယ်ႏမေလာ ဗꩻတွိုႏအောက်တိုဗာလာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ခမ်းခါတဲင် တယ်ႏနိုဝဲင်ဗာလာ ဗꩻတွိုႏဧပီလာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ခမ်းသဲင် နဝ်ꩻသွူ။ ယိုꩻယာႏအလꩻ အဝ်ႏအွောန်ႏထွော့ခါꩻသိုမ်ရာႏသီႏ (ခမ်းခါ၊ ထာꩻခွꩻ၊ ခမ်းသဲင်) နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ခမ်းသဲင်ရာႏသီႏနဝ်ꩻ ရာႏသီႏဥတုပညာႏအလꩻ အွောန်ႏထွော့လွေꩻ အခိန်ႏအကွို့ꩻအဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ ၂ လာနဝ်ꩻ လျားကယ်ꩻထဲင်း အရီး ၄ လာနဝ်ꩻသွူ။
လာအို(လဝ်)ခမ်းထီကို ခမ်းနယ်ႏဖုံႏဟံႏပုင်ႏ- ၂၀၁၄
လာအိုခမ်းထီနဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏခါꩻတောမ်ႏ ခမ်းနယ်ႏ (province or qwang) ၁၇ ဖြုံႏ၊ ဗီယင်ကျန်းဝေင်ꩻတန်ကပါဒါႏ အထူꩻအိုပ်ချုတ်ရေꩻဝေင်ꩻတန် (၁)ဖြုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းနယ်ႏတသာ သုဲင်သောင်ဗွန်ခမ်းနယ်ႏနဝ်ꩻ တယ်ႏထောင်ႏခါꩻဒျာႏ ခရိစ်နေင်ႏ ၂၀၁၃ ဗာႏ ဒီသဉ်ဗာလာ ၁၃ နီꩻသွူ။ ခမ်းနယ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ဖြယ်လွေꩻယင်းတောမ်ႏ ခရဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻ၊ ဒုံ ဖုံႏသွူ။ အဝ်ႏဒုံဝေင်ꩻနဝ်ꩻ ထွာယင်း ဝေင်ꩻသွူ။
၁ အတ္တပူး အတ္တပူး (ဆာမက်ခီဆေး ခရဲင်ႏ) ၁၀,၃၂၀ ၁၁၄,၃၀၀
၂ ဘိုကို ဘန်ဟောက်ဆေး (ဟောက်ဆေးခရဲင်ႏ) ၆,၁၉၆ ၁၄၉,၇၀၀
၃ ဘော်လိခမ်စိုင် ပါ့ခ်စန် (ပါ့ခ်စိန်းခရဲင်ႏ) ၁၄,၈၆၃ ၂၁၄,၉၀၀
၄ ချမ်ပါဆပ် ပါ့ခ်စီ (ပါ့ခ်စီခရဲင်ႏ) ၁၅,၄၁၅ ၅၇၅,၆၀၀
၅ ဟွာဖန် ဇမ်နွာ (ဇမ်နွာခရဲင်ႏ) ၁၆,၅၀၀ ၃၂၂,၂၀၀
၆ ခမ်မိုးနီး သားခက် (သားခက်ခရဲင်ႏ) ၁၆,၃၁၅ ၃၅၈,၈၀၀
၇ လွမ်နမ်းသား လွမ်နမ်းသား (နမ်းသားခရဲင်ႏ) ၉,၃၂၅ ၁၅၀,၁၀၀
၈ လွမ်ပရာဘွမ် ဝေင်ꩻလွမ်ပရာဘွမ် (လွမ်ပရာဘွမ်ခရဲင်ႏ) ၁၆,၈၇၅ ၄၀၈,၈၀၀
၉ အိုဒွမ်ဆေး မွမ်ဆေး (ဆေးခရဲင်ႏ) ၁၅,၃၇၀ ၂၇၅,၃၀၀
၁၀ ဖုန်ဆလီ ဖုန်ဆလီ (ဖုန်ဆလီခရဲင်ႏ) ၁၆,၂၇၀ ၁၉၉,၀၀၀
၁၁ စိန္တဗျူလီ ဆာယာဘိုလီ (ဇေယျပူရီခရဲင်ႏ) ၁၆,၃၈၉ ၃၈၂,၂၀၀
၁၂ ဆာလဗန် ဆာလဗန် (ဆာလဗန်ခရဲင်ႏ) ၁၀,၆၉၁ ၃၃၆,၆၀၀
၁၃ ဆာဗန်းနားခေတ် ဆာဗန်းနားခေတ် (ခန်သဘိုလီခရဲင်ႏ) ၂၁,၇၇၄ ၇၂၁,၅၀၀
၁၄ စီးခေါင် စီးခေါင် (လာမန်းခရဲင်ႏ) ၇,၆၆၅ ၈၃,၆၀၀
၁၅ ဗီယင်ကျန်း ပရီဖက်ချာ ဝေင်ꩻဗီယင်ကျန်း (ချမ်းသာဘိုလီခရဲင်ႏ) ၃,၉၂၀ ၇၂၆,၀၀၀
၁၆ ဗီယင်ကျန်းခမ်းနယ်ႏ ဖုန်ဟောင်း (ဖုန်ဟောင်းခရဲင်ႏ) ၁၅,၉၂၇ ၃၇၃,၇၀၀
၁၇ ရှန်ခိုအန်း ဖုန်ဆဗန် (ပက်ခရဲင်ႏ) ၁၅,၈၈၀ ၃၇,၅၀၇
လာအိုအမျိုးသမီးများ ဆင်းဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားပုံ
နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်တွင် တွေ့ရသော လာအိုကချေသည်များ
လာအိုခမ်းထီကို ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာႏသာႏနဝ်ꩻ ဒို့ꩻတခြို့ꩻနွောင်ꩻ တန်အာမွေးနဝ်ꩻသွူ။ လာအိုခမ်းထီကို အဓိကထာꩻအံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဗွူဟူအဲဉ်တဲင် လာအိုလိုꩻမျိုꩻသီးတာႏ ယေန်ႏငဲးရေꩻတောမ်ႏဘာႏသာႏရေꩻအလꩻ ထွာအီအရေꩻတန်နဝ်ꩻသွူ။ သဉ်းခေါမ်ꩻလာꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လာအိုလိုꩻမူႏသီး ကအဝ်ႏခြွိုင်းကꩻဒါႏ ယိုꩻယာႏခေါမ်လာꩻတမျိုꩻဒျာႏသွူ။ ဆꩻနေးဒျာႏတောမ်ႏစူ လူႏယာႏပိုးထည်ဒျာႏတဲင် လိုꩻမူႏသီးခြွိုင်းကွဉ်ကꩻ အပုင်ႏပွိုင်အလွောက်ꩻ အဓိပ္ပာယ်ႏအဝ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
လာအိုခမ်းထီကို ကအဝ်ႏဒါႏ ခမ်းသားလိုꩻအာ ရွုမ်ꩻပေ့ꩻနီꩻ၊ ပွယ်ꩻတန်တောမ်ႏ အရဲဉ်ꩻအခင်ယဟန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလ့နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻသွူ။
ပီမုဲင်း/ ဆုံခရမ် (လာအိုပွယ်ꩻကာႏနေင်ႏတသာ)
ဟော ခေါင် ပါဒပ်ဒင်
လာအို စွိုးခွိုꩻမွူးနီꩻ (ဒီသဉ်ဗာ ၂ နီꩻ)
↑ The Languages spoken in Laos။
↑ Results of Population and Housing Census 2015။ Lao Statistics Bureau။
↑ Lao People's Democratic Republic's Constitution of 1991 with Amendments through 2003။ “Article 9: The State respects and protects all lawful activities of Buddhists and of followers of other religions, [and] mobilises and encourages Buddhist monks and novices as well as the priests of other religions to participate in activities that are beneficial to the country and people.”
↑ https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2012/12/globalReligion-tables.pdf Template:Wp/blk/Bare URL PDF
↑ Laos။ Lao Department of Statistics။
↑ 7.0 7.1 7.2 7.3 World Economic Outlook Database, Laos။ International Monetary Fund (April 2018)။
↑ About Laos: Geography။ Government of Laos။ 16 April 2016 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။9September 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ Lao People's Democratic Republic and the WTO။ World Trade Organization။ 12 August 2014 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။9September 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ Janssen၊ Peter။ "China train project runs roughshod over Laos"၊ Asia Times။9September 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ Archived from the original on 13 October 2021။
↑ "Laos approves Xayaburi 'mega' dam on Mekong"၊5November 2012။9September 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ Archived from the original on 1 July 2019။
↑ Lao PDR [Overview] (March 2018)။ 12 July 2018 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။9September 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ "Laos Securities Exchange to start trading"၊ Financial Times၊ 10 January 2011။9September 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ Archived from the original on 25 October 2020။
↑ 16.0 16.1 Laos – Climate။ Countrystudies.us။ 20 May 2011 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။6March 2019 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ East Asia/Southeast Asia :: Laos – The World Factbook – Central Intelligence Agency။7March 2021 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 10 September 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ ABOUT XAYSOMBOUN။7May 2019 ကို ဒင်ႏထွူလဲဉ်း မူရင်းမော်ကွန်း။ 10 September 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူလဲဉ်း။
↑ "Laos'un Festivalleri" (in tr)၊ Gezimanya၊ 11 November 2016။ 13 September 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ Archived from the original on 8 March 2021။
↑ "Laos Festivals & Events"၊ visit-laos.com။ 13 September 2021 ကို ထွားစဲစ်ချာထွူ။ Archived from the original on 15 June 2019။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/blk/လာအိုခမ်းထီ&oldid=5436733"
Last edited on 10 May 2022, at 16:14
This page was last edited on 10 May 2022, at 16:14.